Abuurista Orchid | February 2020
Editor Ee Doorashada February 18,2020
Ugu Weyn Ee Abuurista Orchid
Noocyada daryeelka ee xayawaanka xayawaanka ee dheryaha
Wax yaabaha dabiiciga ah, taas oo soo jiidata dareenada daaqadaha dukaamada ubaxa, waa orriga Lady's Slipper. Waa qurux, jilicsanaan, qalaad, wuxuu leeyahay qaabdhismeedka ubaxa orchid ee qaabka kabaha gabadha. Laakiin quruxdeeda kuma koobna oo kaliya. Midabka jilicsan iyo caleenta caleenta waxay siisaa xitaa khafiif ah.
Orchid Cymbidium, xeerarka daryeelka ubaxa ee windowsill
Cymbidium waa ubax ka mid ah qoyska Orchid. Macluumaadkii hore ee ku saabsanaa waxay ka muuqatay dalka Shiinaha in ka badan laba kun oo sano ka hor. Xitaa Confucius qudhiisu wuxuu ku magacaabay ubax buug oo ah boqorka lafdhabarta. Cymbidium waa sahlan tahay in lagu hayo, taas oo ka dhigaysa mid aad u caan ah ee beerta, gaar ahaan bilowga ah. Qeexitaanka guud Cymbidium waxaa lagu magacaabaa jilicsanaanta ugu quruxda badan ee orchids, taas oo aan la yaabin dhammaan.
Fikrado badan oo nafaqo leh, salad ah oo fudud oo ka soo soo kaabajka Peking leh ham
Sifooyinka Hamedorei sii koraya guriga
10 nooc oo ah geedo bjørk
Quruxda beerta duufaantu waxay ku dhalataa: cirridka cagaarshowga
Asparagus waa geedka asparagus oo ka soo jeeda Koonfurta Afrika iyo Madagascar. Waa wax aan qabyo ahayn beerashada, si dhakhso ah ayuu u kobciyaa, sidaas darteedna waa caan ku ah guryaha iyo xafiisyada. Meesha ugu fiican ee isaga loogu talagalay waa dambiisha laydhka ah ee aan ku jirin qoraxda tooska ah. Maxaa la sameeyaa haddii aspargus uu noqdo mid jaale ah oo la qubey? Read More
Noocyo iyo noocyo of yew leh sharaxaad iyo sawir
Crystal Anthurium - ubax ka soo baxa gawaarida
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Abuurista Orchid 2020